Kubonakala sengathi kungekudala nje amadolobha amakhulu kuphela ayengaziqhenya ngokuba khona kwamaqembu okuthuthukisa noma izikhungo zezingane. Ezimweni eziningi, beyizifundo ezibiza kakhulu futhi zanikezwa ngaphandle kokubandakanyeka koomama, kaningi amahora angu-2-3. Ukukhetha okunjalo "ugogo". Kulabo abangenawo umuntu oshiya ingane ngehora elilodwa.
Kuze kube manje, cishe kuzo zonke izifunda zedolobhana, omama bangathola okuthiwa "ukuthuthukiswa," futhi ngisho nabangabunye.
Zaba yizinhlelo eziningi ezihlukahlukene, zanikeza izinhlelo ezahlukene ezahlukahlukene futhi zaqala ukuqhuba imisebenzi ehlanganyelwe yabahlanganyeli.
Lezi zikhungo zibizwa ngosizo lwezinhlelo zamavivinyo zamahhala, ziyamemeza ngezindlela ezidumile futhi zidumisa abafundisi bazo. Futhi ngenxa yombono ovamile, uqala ukuthungula impendulo ngokuxuba futhi ubuze ukuthi kungcono ukunikeza ingane. Ingabe kufanelekile ukwenza lokhu nhlobo? Ingabe izikhungo zokuthuthukisa zibalulekile noma kuwanele ukutadisha ekhaya nabazali?
Sizozama ukuphendula yonke imibuzo.
Izinzuzo eziyinhloko zezikhungo ezisathuthuka
Okokuqala, kufanele sicacise ukuthi asikhulumi nganoma yiziphi izifundo zokugxila okuncane. IsiNgisi, isibonelo, noma chess.
Akukona nokulungiselela inkulisa, lapho izingane ngokwazo zihlanganyela nothisha, okuyiyona ewusizo kakhulu futhi enomthelela ekushintsheni kangcono ingane esikhathini esizayo.
Sizokhuluma ngamakilasi kanye no-smam, kodwa ezindaweni ezikhulayo. Yeka ukuthi imihlangano enjalo iyadingeka nokuthi kungani "ukuthuthukiswa kwekhaya" kungenzeka ukuthi akunakwanela.
Isikhungo sokuqala esingenakungabazeki nesikhungo esithuthukayo siyititjhere. Akuwona wonke umama, kungakhathaliseki ukuthi uyamangalisa kangakanani, uyazi ukuthi ungaba kanjani uthisha omuhle. Phakathi nendawo, njengombuso, uthisha-isazi sezengqondo ozama ukuthola indlela eya kuzo zonke izingane futhi, ngenxa yokuhlangenwe nakho kwakhe ekusebenzeni nezingane, uyamthola, ngezinye izikhathi ngokushesha kunomama.
Phela, Mama, unomusa futhi unomusa, uthanda nje ukudlala naye, futhi emva kwayo yonke imithetho esemqoka yomsebenzi ukuthuthukiswa. Sithatha izingane lapho ukuthuthukisa, hhayi ukudlala. Ngezinye izikhathi ama-mamamge ahluleka ukuthembeka, futhi nje afune noma afune ukuthuthukisa imidlalo.
Inzuzo yesibili ukuthi umama uvakashela izikhungo ezifanayo nengane - lokhu kukukhula komzali ngokwakhe. Kuyinto eyodwa yokufunda izincwadi zemfundo nokubuka izinhlelo zevidiyo, nokugcina umsebenzi wothisha njengenye. Ukwenza yonke imisebenzi ngokumomotheka, umama futhi ufunda ukuba nesineke, ukukhalipha, ukuthula. Futhi nakanjani lapho kusetshenziselwa ukuzivocavoca okunjalo ukuqonda okubili phakathi komama nengane kuthuthukiswa.
Njengoba usufundele ekilasini, kungenzeka ngesikhathi sokugula noma ukungakwazi ukuza kuzo ngezizathu ezihlukahlukene, qhubeka nokubhekana nengane ekhaya, wazi ukuthi kungcono kanjani ukuthuthukisa ingane.
I-third plus, futhi iningi labazali (kanye nezingane), okubaluleke kunazo zonke kuhlanganiswa.
Kuyathakazelisa kakhulu ukutadisha kanye noMasha noVanya kunendlu ngokwayo.
Futhi uma ucabanga ukuthi iqembu raznogovozrastnye, futhi kuze kube seminyaka emibili nyangazonke egcwele amakhono amasha, khona-ke izingane zizodlala, zilingise, zama ukuphinda lezo zinsuku ukuthi ikhaya liyivila nje kuphela.
Konke, kumnandi kakhulu futhi ngokushesha.
Kuyajabulisa kakhulu ukufunda imibala. Futhi akunandaba ukuthi umama ubonisani futhi utshela ekhaya kudayisi kanye nezinye izinto zokudlala. Lapha, ngisho nenyane elilodwa elineminyaka elilodwa lizofuna ukuphinda umbala omdala wobuningi.
Kuyinto engcono kakhulu ukucela ibhodlela. Kule nkinga, kunzima nakakhulu, kodwa kuphawulwe isikhathi eside ukuthi ezinganeni zezingane zenqaba ukubopha izinwele lapho wonke umuntu ecela ibhodlela.
Nakani lapho ukhetha iqembu, inani lezingane eqenjini. Kuyinto efiselekayo ukuthi babengabantu abangaphezu kuka-5-6. Njengoba sengihlanganisa abazali nomfundisi lapha, sizothola abantu abaningi egumbini elivaliwe, okungukuthi, ngeke lizuze noma ubani.
I-fourth plus yezindawo ezikhulayo zisebenzisa izindlela ezahlukene zokuthuthukiswa kwangaphambili. Yiqiniso, omama nsuku zonke ukufundisa izingane zabo, futhi bacabange indaba yokukhanyisa nokutshela into yonke yesibili, kodwa kunezindlela ezithile zokufundisa, ezizibonakalise ngempumelelo ngokwabo. Odumile kunawo wonke: indlela kaMontessori, uDoman, uDanilov.
Ama-cubes amaningi adumile ka-Nikitin. Futhi uma ungenza amakhadi ngokwakho, kodwa isethi efanayo ye cubes izoba kubi kakhulu.
Ezikhathini ezikhulayo, kaningi, izinto ezinjalo zikhona. Nakuba kukhona ezinye izinto ezisetshenziswayo. Ungenza izindlu ezifanayo.
Ungakhetha kanjani isikhungo sokuthuthukisa esifanele?
Kwezinye izindawo, ukuqeqeshwa kwenzeka ngendlela eyodwa. Kukhona (izindawo zabo eziningi kakhulu) ngezihlobo ezixubekile. Okungajwayelekile kulabo abakhona uhlelo. Ukuphikisa ukuthi noma iyiphi yazo ingcono kunezinye ezingenakwenzeka, i-pokazy futhi ingane yakho ngeke izame wena.
Qinisekisa ukuvakashela nendodana yakho noma indodakazi yakho amakilabhu amaningana. Iqiniso liwukuthi uthisha omuhle nomkhathi endaweni eyodwa bangashintsha zonke izinto ezibiza kakhulu kwenye.
Ingane kufanele ihlaziye, kodwa ngesikhathi esifanayo isebenza kahle.
Esinye isifundo ngokuvamile kunzima ukwahlulela, kodwa kwenzeka ukuthi ngokwanele kunele ukuqonda ukuthi uthole indawo ephelele wena nomntwana.
Izindawo eziningi zokuthuthukiswa ziqoqa amaqembu kusukela ezinyangeni ezingu-8. Okuthandwa kakhulu, noma kunjalo, kusukela eminyakeni engu-1.5. Kule minyaka yobudala, zonke izingane sezivele zihamba kahle, zilula ukwenza isithakazelo, ungenza imisebenzi engaphezulu futhi sezivele zilinde umhlangano nomunye nomunye.
Ngendlela, sithola esinye isihlanu nesiyalo. Imisebenzi yentuthuko ingaba umvuzo wengane. Uzozama futhi akwenze ube lula ukulungela iqembu.
Ngenxa yamakilasi, kulula ukuseka umbuso. Emva kwakho konke, uma kubhalisiwe futhi ingane ilinde, ngeke kube nezizathu ngesidlo esingakalungiselelwa, ukugeza kanye nakho konke okunye. Uzoqala futhi ukukhula ube yisikhathi sokuba phakathi.
Izikhungo zokuthuthukiswa - isinyathelo sokuqala sokulungiselela inkulisa
Njengomthetho, isikhathi esiseduze sokufika, ikakhulukazi amakilasi athuthukayo ashintshiwe. Kukhona ukuzimela ngokwengeziwe, ukuba khona komama akubalulekile kakhulu futhi kancane kancane konke kuhamba ngendlela ehlukile - ukulungiselela amakilasi ngaphandle komama.
Imisebenzi enjalo ibaluleke kakhulu kumcwaningi omncane. Ingane ifunda ukwenza izinqumo ngokwazo, ukuzikhandla, ukufuna usizo kubafundisi, uma kunesidingo. Kodwa ngaphambi kwalesi sikhathi, ukutholakala komuntu ongowokuzalwa kuyashukumisela umuntu omncane ukuba akholelwe yena futhi kusize ukuthuthukisa ngokushesha. Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi uhlanganyela nengane yakho ekhaya noma uvakashele izikhungo zokuthuthukisa, zama ukuchitha isikhathi esiningi naye ngangokunokwenzeka. Ngempela, ngokumangalisayo, yizingane, abazali abavame ukuhlangana nabo, bakhule bazimele futhi banomthwalo wemfanelo.
Ngisho noma unesiqiniseko sokuthi ungathuthukisa ngokuphelele ingane ekhaya, sisazivumela ukuba sincoma ukuvakashela amakilasi amaningana ezindaweni ezikhulayo ukuze sithole okuthile okusha futhi sibone ukuthi ingane iziphatha kanjani eqenjini, hhayi ngesikhathi semidlalo enkantolo, hhayi vhost nje, futhi phakathi nokuthuthukiswa kwemidlalo.
Kubalulekile ukuthi ungazibekela umgomo wokukhulisa ikhono. Thina, njengabazali, kufanele sisize izingane zethu zihlakulele amandla okuba khona kuwo. Akuzona izindlela ezinobudlova, kodwa umdlalo, ekilasini, ekukhulumisaneni. Izindlela ezehlukene, kokubili ekhaya nasezikhungweni ezikhulayo.
Ukuthuthukiswa kwenkulumo ezinganeni kuze kube unyaka, isiteji sokwakhiwa kwenkulumo
Imithi yokwelapha inganekwane ukusiza abazali
Ukuthuthukiswa kwengane nokufunda umhlaba
Ngidinga ukuthi igama elithi "ayikwazi" ezinganeni
Ukungabi namandla akuyona iphutha, kodwa inkinga yengane
Yiziphi izici zokuthuthukiswa kwengane yakho yokuqala
Izingane ezijabulayo - abazali abajabulayo
Sichitha iqembu lezinkukhu ngendlela yokuqala - imidlalo funny, imibono
Ukushayela nge-ithanga, ushizi kanye nembewu
Ukunakekelwa okufanele kwezinwele ezinde
Inkinga ye-computer yokulutha ukubheja ezinganeni
Uyakholelwa othandweni ekuqaleni kokubona?
Izivivinyo zofuzo ngesikhathi sokukhulelwa
I-paella yaseSpain yendabuko
Izithako ezinamakhomikhali ezihlukile - ukuvikelwa okunamandla kwezinwele nezipikili
Indlela yokuthola amaholide amahle futhi angabizi kakhulu e-Ukraine
Izinto ezinamathekisthi eziphezulu ezinama-5 ebusika ka-2017
I-Aquapile e-salon enobuhle
Massage ye-Ayurvedic: amasu, amasu